Izany no fiasan'ny windows amin'ny macOS Sierra | Avy amin'ny mac aho
Toy izany no fiasan'ny windows ao amin'ny macOS Sierra vaovao
Androany aho dia nahazo ny fisaoran'ny mpiara-miasa iray izay omaly namaky ilay lahatsoratra izay aingam-panahy tamin'ny olany, ilay niresahany momba ilay mandrindra ny toerana vaovao ao amin'ny macOS Sierra. Ity mpiara-miasa ity dia efa tonga teo amin'ny tontolon'ny paoma manaikitra efa ela lasa izay ary faly kokoa amin'ny fanapahan-kevitra noraisina izy.
Androany aho dia mamoaka lahatsoratra vaovao natokana ho an'ireo mpampiasa rehetra tonga amin'ny tontolon'ny paoma ary hiresaka momba ny fomba fitantanana windows amin'ny Mac izahay.
Ny fitantanana ny windows amin'ny Mac, indrindra indrindra amin'ny macOS Sierra, ny rafitra vaovao natolotr'i Cupertino ho an'ny mpampiasa dia tsy be pitsiny kokoa noho izay hitantsika amin'ny rafitra hafa toy ny Windows, pSaingy manana safidy sasantsasany izy ireo izay mahatonga azy io hamokatra bebe kokoa.
Izay hiresaka aminao anio dia azo ampiharina amin'ny kinovan'ny rafitra teo aloha, na dia avy amin'ny tanan'ny macOS Sierra aza ny fanovana habe vaovao momba ny fikandrana vitamina. Araka ny efa hitanao, ny varavarankely ao amin'ny rafitra Mac dia manana bokotra telo amin'ny ankavia ambony. Amin'ny mena dia manidy tanteraka ny varavarankely izahay, miaraka amin'ny volomboasary izay ataontsika dia mampihena ny varavarankely ary miaraka amin'ny maitso dia mankamin'ny efijery feno isika, eny, ny efijery feno fa tsy hampitombo. Apple dia nametraka maody efijery feno taloha izay ahafahana manararaotra tsara kokoa ny efijery amin'ny solosaina finday toa ny MacBook Air 11-inch na MacBook 12-inch.
Ny manova ny haben'ny fikandrana dia tsy maintsy ataontsika akaiky kokoa hatrany amin'ny zoro ambany ankavanana amin'ny iray amin'ireo zoro efatra mandra-pahazoantsika ny zana-tsipìkany. Nihatsara io fihetsika io tao amin'ny macOS Sierra ary izao ve dia afaka manova ny habeny amin'ny zoro efatra isika, manamora ny hetsika amin'ny tranga maro.*
Rehefa miresaka momba ny fampitomboana be indrindra amin'ireo zoro 4 ao amin'ny macOS Sierra izahay dia midika fa raha mankamin'ny iray amin'ireo zoro 4 ianao ary tsindrio indroa, dia hampitomboina ny varavarankely mankany amin'ny zoro nolazainao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Mac OS X » macOS Sierra » Toy izany no fiasan'ny windows ao amin'ny macOS Sierra vaovao
Alberto De Villa dia hoy izy:
Pedro, tsy ny lahatsoratrao voalohany no hita ao amin'ny lisitra Google Now, tao anatin'ny fotoana roa nandehanany dia tena diso fanantenana aho. Nangataka ireo minitra teo amin'ny fiainako namaky lahatsoratra ratsy. Vita ratsy, fampahalalana kely ary fampahalalana diso izay ratsy indrindra, tsy misy loharano, tsy misy rohy mankany amin'ny lahatsoratra ofisialy, milaza fa tsy sarotra noho ny Windows izy io, rehefa tsy fantatrao ny fahasamihafana lalina ao amin'ny voan'ny rafitra.
Mahamenatra ny tsy maintsy andefasanao lahatsoratra ratsy maro hankanesanao any amin'ny couta anao sy handoavana karama. Bebe kokoa ny herim-poko ho an'ny olona hamaky azy amin'ny fisehoana aminao ao amin'ny fizaranao lahatsoratra ary hahita vaovao mahakivy be izy ireo.
Tena tsy heveriko fa tianao ny teknolojia, satria raha nanao izany ianao dia hanadihady bebe kokoa ary raha te-hanao tatitra ianao dia manoratra lahatsoratra misy atiny tsara kokoa.
Manoro hevitra aho alohan'ny hampiasanao ny Mac-nao sy hitaraina momba ny lesoka fampitahana rakitra amin'ny iCloud any Sierra, manakarama Internet mendrika. Eto Meksika ny fenitra dia 20Mbits ao an-trano ary manana 200Mbits ao amin'ny birao izahay ary minoa ahy, tsy hanana olana amin'ny fampidirana ireo rakitrao ianao. Satria novakiako koa izay nosoratanao, mitaraina momba ny rafitra rehefa manana Internet izay tsy hampiditra anao 4chan akory ianao. Midira amin'ny solosainanao izao ary manaova fikarohana alohan'ny hiresahanao zavatra tsy dia fantatrao.
Ny famerenana ny fikandrana amin'ny fikandrana efatra dia azo alaina avy amin'ny 10.7 Lion, rafitra 5 taona.
Manantena aho fa tsy hahita lahatsoratra hafao ary raha izany dia zavatra tokony hovakina izany.
Mpanara-maso ny serivisy AASP.
Mamaly an'i Alberto De Villa
Shisui uchiha dia hoy izy:
Nifanaraka tanteraka tamin'ny mpiara-miasa Alberto, efa hatry ny ela ny fanovana ny haben'ny windows, lahatsoratra mahatsiravina, naoty maloto toy izany, toa asa an-tsekoly tsy dia vita firy.
Valiny tamin'i Shisui Uchiha
Pedro Rodas dia hoy izy:
Marina indrindra fa misy ny olona amin'ny ambaratonga fototra ary mividy Mac. Tokony hatsipintsika ve ireo olona mila fanampiana? Misaotra amin'ny fampidirana.
Valiny tamin'i Pedro Rodas
Ya dia hoy izy:
Tsy nisy niova ny MacOS Sierra ……. azo natao tamin'ny kapiteny izy io ary na dia ny kinova taloha aza dia ovao ny habe amin'ny lafiny rehetra ... Andriamanitra ô ... tsy mino aho fa ianao no nanoratra an'io ...
Mamaly an'i Yup
Alohan'ny hanomezana hevitra dia tokony hamaky kely momba ny vaovaon'ity rafitra ity ianao. Raha nihatsara ny raharaha. Ary minoa izany na tsia, bilaogy novakin'ireo mpampiasa maro izahay fa tsy izay rehetra mamaky anay dia manam-pahaizana toa anao. Manana mpiara-miasa amiko izay tonga amin'ny tontolon'ny fanaovana computation amin'ny Mac aho ary tsy mahay mamorona fampirimana akory, ka alohan'ny hitsikerana ny asa ataonay ho an'ireo mpampiasa tsy mahalala ny rafitra, inona no tokony ho arahabainao rehefa tianao lahatsoratra iray ary tsy hoe rehefa tsy tianao izany. Misaotra amin'ny fampidirana.
Tsy mitaraina momba ny haavon'ny fahalalana aho. Tonga ny fitarainana satria tsy dia nohazavaina ilay lahatsoratra, tsy nisy fotoana nanondroanao fa manova ny habeny amin'ny alàlan'ny fanindriana indroa izy io, miresaka momba ny fanovana habe ny varavarankely fotsiny ianao, milaza fa afaka manao zavatra azonao atao tokoa ianao efa amin'ny kinova taloha. Ankehitriny efa nahitsinao ilay lahatsoratra ary nampianao fa ny fanovana habe azy ho azy amin'ny alàlan'ny fanindriana indroa, dia misy dikany ilay lahatsoratra ary hitako fa liana ihany koa izy satria tsy fantatro ny momba ilay endrika vaovao an'ny Macos Sierra.
Heveriko fa izany no zava-nitranga tamin'ny ankamaroan'ny fanehoan-kevitra, tsy afaka nanazava tsara izay nolazainao ianao. Tsy nisy marimaritra iraisana sy antsipiriany bebe kokoa ilay lahatsoratra. Ho an'ny ambiny, araka ny nolazaiko, heveriko fa tsara fa resahina ireo lohahevitra ireo, na dia toa fototra aza izy ireo, maro ny olona (amin'ity tranga ity aho) tsy mahalala an'io
xuanin dia hoy izy:
Ary ny zavatra mahatsikaiky indrindra momba azy dia ireo zava-baovao roa ampidirin'ny macOS Sierra momba ny fitantanana ny fikandrana dia tsy voalaza ao amin'ilay lahatsoratra akory.
Ho an'ireo izay tsy mahalala, ny toetra voalohany dia ny «windows windows», izay misy ny rehefa manakaiky tsimoramora ny varavarankely iray, dia miova ho azy ny toerana misy azy amin'ny varavarankely izay raikitra toy ny hoe nahasarika andriamby ka mora kokoa ny mampifanaraka ireo varavarankely amin'ny birao. Ny zava-baovao faharoa dia rehefa manindry indroa amin'ny lafiny efatra amin'ny varavarankely ianao dia manitatra amin'ny lalana mifanaraka amin'izany mandra-pahatongany any amin'ny sisin'ny efijery.
Mamaly an'i xuanin
Misaotra anao niditra Nohavaozina ilay lahatsoratra mba hanazava kokoa ny dikan'ny fanatsarana ny macOS Sierra. Mirary ny soa indrindra
Pedro, misaotra anao tamin'ny anjara birikinao ary izahay izay avy amin'ny Windows dia maintso ary manampy anay ity vaovao ity. Misaotra hatrany ary tohizo.
Fernando García dia hoy izy:
Ny fizotry ny fanamaivanana ny windows dia miadana loatra ary mandany fotoana.
Talohan'izay dia tsara kokoa: tsindrio tsotra amin'ny bokotra maitso. Ary ny fit nety dia tsara kokoa tamin'ny rafitra teo aloha, ankehitriny dia be loatra ny toerana banga sy tsy misy ilana azy eo amin'ny varavarankely; Midika izany fa varavarankely goavambe izy ireo.
Toa hitako fa niharatsy be hatrany.
Valiny tamin'i Fernando García
Tantano ny fitehirizanao ao amin'ny macOS Sierra, fitaovana vaovao ahafahanao miasa amin'ny fomba milamina kokoa
Lahatsary Oktobra an'ny Campus Apple 2